Wuhan Coronavirus virus – စာမကျြနှာ 8 – Healthy Life Journal
ကိုထက် ဟောင်ကောင်ရှိ အိမ်မွေးခွေးတစ်ကောင်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးခံထားရတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင်ရှိ ပညာရှင်တွေက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုပါ သတိထားဖို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗြိတိန်ပညာရှင်တွေကတော့ ဒီအချက်က မမှန်ကန်နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁၀၀ ဦးကျော်ပြီဖြစ်ပြီး...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. လူစုဝေးတာကြောင့် ၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ လူစုလူဝေးပြဿနာအကြောင်းပြောရရင် ထင်ထင်ရှားရှားသိနိုင်တာက တောင်ကိုရီးယားပါ။ ပိုးရှိသူတစ်ဦးက ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့နေရာသွားရင်း အဲဒီနေရာက လူတွေရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီး ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။...
ငွေစက္ကူမှတစ်ဆင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ငွေစက္ကူကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တာကြောင့် ငွေမထိတွေ့ရတဲ့နည်းပညာကိုပဲ အသုံးပြုသင့်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က အကြံပြုထားပါတယ်။ ကူးစက်တတ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ငွေစက္ကုမျက်နှာပြင်တွေမှာ ရက်အတော်ကြာ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ လူတွေအနေနဲ့ ငွေစက္ကူကို လက်နဲ့မထိတွေ့တဲ့နည်း သုံးသင့်ပြီး တကယ်လို့ ငွေစက္ကူကိုင်တွယ်ပြီးရင်တောင် လက်ကိုဆေးကြောပေးသင့်တယ်လို့...
(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်၏ သုံးသပ်ချက်) မေး. နိုင်ငံအများစုမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19) က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် မဖြစ်တာလဲဆိုတာကို လူတွေက အမေးများနေကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့ထင်မြင်ချက်လေးကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. ဆရာ့အနေနဲ့ ပြောနိုင်တာကတော့...
ကိုထက် အမေရိကန်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူတွေက ၀ူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြတဲ့ ဆေးသစ်ကို များမကြာမီအချိန်မှာ လူသားတွေနဲ့ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ကြပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ အချိန်မနှောင်းခင်လေးတော့ ဆေးကိုအောင်မြင်အောင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှာပါ၊ မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်’’လို့ ကူးစက်ရောဂါဝေဒနာနဲ့...
”၀ူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19)က လက္ခဏာ မပေါ်ခင်မှာ ကူးတဲ့အတွက် ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲတာပါ”
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရ ၀ူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19) ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သေဆုံးသူဦးရေ ၂၄၆၅ ယောက်နဲ့ ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၇၉၉၃၀ ယောက် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာ သေဆုံးသူဦးရေ ၂၀...